“Any amin’i Dada ny lakile!” | mandimby maharo
“Any amin’i Dada ny lakile!”
Posted on 11 June 2012 by Mandimby Maharo
Tsy azo iodivirana ny hisian’ny fifampiraharahana eo amin’ireo mpifanandrina politika atoato. Na ny vondrona iraisam-pirenena na ny avy eto antoerana dia efa samy maneho fahavononana amin’ny hampifanantona ireo tsy mitovy hevitra.
Ny tena andrandrain’ny rehetra aloha dia ny fihaonana eo amin’dRavalomanana Mark sy Rajoelina Andry izay mety ho tanterahina eo ambany fanelanelanan’ny vondrona Sadc. Ity vondrona ity izay somary mbola manana olana kely eo amin’ny olona ho tendreny hitantant io dinika io : ilay mosambikana Joachim Chissano nahitana ny fifanarahan’ny Maputo ve sa ilay afrikana tatsimo Marius Fransman, namoaka ny tondrozotra. Sahirana ihany ny Sadc satria iaraha mahita fa na ilay fifanarahana voalohany na ilay lazaina fa ampiharina ankehitriny dia samy tsy mbola nafarana izao tetezamita izay fa misedra olana avokoa.
Olana izay rehefa alalinina dia tsy avy amin’ilay olona nanao ny fanelanelanana fotsiny ihany, na avy amin’ilay fifananrahana koa aza. Tsy avy amin’ireo satria matoa ireo nahazo ny tso-dranon’ny vondrona iraisam-pirenena ary nataotsika malagasy sonia dia nety izany. Ny hita dia ireo mpanao politika malagasy mhintsy ny tsy ampy fahamatorana. Eo aloha ny hoe fandavana ny Sonia izay natao, fa eo ihany koa ny tsy fitsinjovana ireo malagasy izay soloana tena amin’ireny fanaovana Sonia ireny. Tsapa ihany koa fa mbola ao ilay fiezahana ny hisongadina ka afahana ilazana fa izy no loharano nipoiran’ny vahaolana. *
Na izany na tsy izany nefa aloha dia misy fahamarinany io fiteny hoe any amin’ingahy Ravalomanana ny fanalahidin’ity krizy ity. Satria na inona filazan’ireo mpanao politika eto antoerana fa manana fahefana izy ireo hamoahana izao olana izao dia tsy maintsy hiafara amin’ny fifampidinihana amin’ingahy Ravalomanana Marc ihany no iafarany. Tsiahivina ohatra ny nisian’ireny fivoriana maro be nolazaina fa natao teto dia tsy nankaiza fa lasa tantara fotsiny ihany. Teo ny Dinika santatra, fiaonandoham-pirenena sy ireo dinika samy mpanao politika teto antoerana. Najoro teto izany “Raiamandreny Mijoro” izany fa toa nikoro ihany ny niafarany na dia misy aza ezaka atao mba hanoatohanana azy ireo any ho any. Efa natao teto koa ny fanentanana ireo mpikambana avy amin’ny mpanohitra hiditra ao anaty fitondrana. Nisy tokoa ny tsy nahatanty ny mana miraviravy ka dia roboka sy sahy nyvalo fa tena hahavita, saingy indrisy fa natao haingo-bato fotsiny ihany ilay atao hoe “fampiraisam-pirenena”, “fiaraha mitantana” sy ny sisa fa toa vao mainka aza mahavery fa,ahy mbola velona ireo vahoaka mpandoa hetra ny nafitsony. Dia izao, tsy maintsy miverina manontany ny hevitr’ingahy Marc Ravalomanana ihany. Na dia efa ao anaty fitondrana azan y ankamaroan’ireo olona nandrafitra izany ankolafy izany dia toa io fihaonana amin’izy tenany io no hany sisa fanantenan’ireo mpikatroka politika. Na dia efa ireo ary no natao dia toa tsy mamaha ny olana mihintsy ka toa tsy maintsy hiafara amin’ny fampidirana azy ao amin’ny fitatanana ny firenena ihany izy ity.
Mifanindran-dalana amin’izay fihaonana izay koa dia efa manomboka hita soritra ankehitriny ny finavan’ireo avy eto an-toerana handamina sy hampihavana ireo mpanao politika ireo. Ny misongadina amin’izany ilay fampihavanana nataon’ny Ffkm ny faran’ny herinandro teo. Na dia mbola somary mahasadaikatra ny be sy ny maro ihany aza izy ity dia teo aloha ilay finiavana. Finiavana ny hanome ohatra tsara. Ilay finiavana ny hanentana ny fiarahamnina hiroso hatrany fa tsy hiazoazo eto. Maro ny azo kianina saingy izay finiavana izay no hita fa tsy mbola misy ka mahatonga ity tetezamita ity hihitatra toy izao.ilay finiavana ny hanome fanantenana ny Malagasy. Ilay finiavana hifamela ka hampandefitra ny ambo-po.